म्यूजिक भिडियोका राजा मानिने नायक पल शाह र पुष्प खड्काबिच बोलचाल छैन ? पलले लाइभमा आएर खोले यस्तो रहस्य – Gazabkonews
म्यूजिक भिडियोका राजा मानिने नायक पल शाह र पुष्प खड्काबिच बोलचाल छैन ? पलले लाइभमा आएर खोले यस्तो रहस्य
विबाहित नायिका वर्षा राउतले के गरिन् यस्तो ?
के भयो चर्चित कलाकार आशा खड्कालाई ? आशाको यो अवस्था देखेर आमा भक्कानिइन
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीले मध्यरातमा दिइन् छोरीलाई जन्म
म्युजिक भिडियो पाउँन छाडेपछि प्रहरीमा भर्ति भए दुर्गेश थापा
बच्चा जन्माउने समय आएपछि हतार हतार प्रियंका र आयुष्मानले झोलाभरी सामान कोचेर अस्पताल दौडीए
चर्चित गायिका तथा एमालेकी नेतृ कोमल वलीले यि ह्याण्डसमसँग गर्दैछिन् विबाह
अफिसमै किरन केसि र नायिका स्वस्तिमा खड्काले देखाए रमिता
भारतमा रहेकी नायिका विपना थापा भारत छाडेर नेपाल आउँदा देउरानीसँग अँगोलो हाल्दै भक्कानिएर रोइन्
चर्चित नायिका पूजा शर्माले आफ्नो विबाहको कार्ड छापेर आकाशलाई एकान्तमा पुगेर भेटेर दिइन् कार्ड
मिनाले प्रेमी सार्वजनिक गरेसँगै मनोज पनि लागे विबाहको तयारीमा
म्यूजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा फड्को मारेका अभिनेता हुन्, पल शाह र पुष्प खड्का । पलले फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट लिड अभिनेताको रुपमा ब्रेक पाएका थिए भने पुष्प पहिलो फिल्म ‘अझै पनि’ मा सहायक भूमिकामा थिए । पललाई डेब्यू फिल्मले नै रातरात स्टार बनाएको थियो । पुष्पको करिअरले भने गति लिन केही समय लाग्यो । फिल्म ‘मंगलम’ बाट उनी स्टार बनेका थिए ।
म्यूजिक भिडियोबाट राम्रो क्रेज बनाएका उनीहरुबीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ । तर, फिल्मवृतमा पल र पुष्पलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भन्ने गरिन्छ । यद्यपि, उनीहरु यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । आफूहरुबीच कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धा नभएको उनीहरुको भनाई छ । पलले छाडेको फिल्म ‘तिम्रो मेरो साथ’ पुष्पले साइन गरेपछि भने उनीहरुबीच अघोषित टकराव सुरु भएको चर्चा छ ।
तर, यो कुरालाई दुवैले अफवाह बताएका छन् । फिल्म ‘मनसँग मन’ को एक गीतको छायांकनको क्रममा पलले आफूहरु मिल्ने साथी रहेको र सधैं हुने बताए । पुष्पले पनि उनको कुरामा सहमति जनाउँदै भने( ‘हामी म्यूजिक भिडियो ब्याकग्राउन्डबाट आएका हौं । हामीबीच पहिल्यैदेखि ट्यूनिङ राम्रो थियो । कारणवश् पलले गर्न नसकेको फिल्म मैले गरेँ । तर, त्यस्तो टकराव छैन ।’
पलले कथावस्तु चित्त नबुझेपछि ‘तिम्रो मेरो साथ’ बाट हात झिकेको चर्चा छ । यद्यपि, यसबारेमा उनले कुनै जानकारी दिएका छैनन् । रमेश एमके पौडेलले निर्देशन गर्ने यो फिल्मको नाम पहिला ‘रेड वाइन’ राखिएको थियो । पलले फिल्म छाडेपछि निर्माण टिमले उनको ठाउँमा पुष्पसँग सम्झौता गरेको हो । फिल्ममा अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह पनि मुख्य भूमिकामा रहनेछिन् ।
निशान र रचनाको ‘जिन्दगीको आभास’मा आकाश र प्रकृतिको अभिनय
काठमाडौँ । गायक निशान भट्टराई र गायिका रचना रिमालको नँया गीत जिन्दगीको आभास सार्वजनिक भएको छ ।
जसमा शब्द सुदिप लम्साल र संगित कमल खत्रीको रहेको छ संगित संयोजन रिकेश गुरुङ्खको रहेको छ । सो गित आरोही ईन्टरटेमेन्टमा रेकडिगं गरिएको हो ।
भिडियोमा निर्देशक केशव प्रसाद रिजाल कोरियोग्राफर सुनिल क्षेत्रीको रहेको छ । भने सिनेमाटोग्राफर, सम्पादन र रंग संयोजन पवन सुसलिंगको रहेको छ र अभिनयमा आकाश श्रेष्ठ र प्रकृति घिमिरेको अभिनय रहेको छ ।
शिल्पा पोखरललाई फेरी अन्याय भयो !